ဟောင်ကောင်နေ ဗြိတိသျှနိုင်ငံသားတွေကို တရုတ်အစိုးရ အသိအမှတ်ပြုတော့မည်မဟုတ်
ဟောင်ကောင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် နဲ့ BNO လို့ခေါ်တဲ့ဗြိတိန်ပြည်ပနိုင်ငံသားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်
ဗြိတိသျှကိုလိုနီဟောင်း ဟောင်ကောင်နေပြည်သူတွေကို ထုတ်ပေးထားတဲ့ BNO လို့ခေါ်တဲ့ဗြိတိန်ပြည်ပနိုင်ငံသားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေကို ဆက်လက် အသိအမှတ်ပြုတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ တရုတ်နိုင်ငံက ပြောပါတယ်။
“BNO လို့ ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံကူး လက်မှတ်က အရင်ကလို ဆက်ပြီး ရှိနေမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ တရုတ် နိုင်ငံ ရဲ့အချုပ်အခြာ အာဏာကို ချိုးဖောက်သလို ဟောင်ကောင်နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းရေးကိုလည်း ဝင်စွက်နေပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့က စပြီး ဗြိတိန်ပြည်ပနိုင်ငံသားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို အသိအမှတ် ပြုတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး” လို့ တရုတ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရ Zhao Lijian က ပြောပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံက ဟောင်ကောင်သား အများအပြားကို ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ ဒုတိယတန်းစား နိုင်ငံသားတွေ အဖြစ် သွတ်သွင်းဖို့ ကြိုးပမ်းနေ တယ်လို့လည်း တရုတ် ပြောခွင့်ရ Zhao Lijian က ပြောပါတယ်။
တရုတ်တို့က ဟောင်ကောင်က ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုတွေကို နှိမ်နင်းအပြီးမှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံက ဟောင်ကောင်နေပြည်သူ အများအပြားကို ခိုလှုံခွင့်ပေးမယ်လို့ ကတိပေးထားခဲ့တာပါ။
BNO အစီအစဉ်အရ ဟောင်ကောင်နေ လူပေါင်း ၅. ၄ သန်းက ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်ခွင့်နဲ့ အလုပ်လုပ်ခွင့် ငါးနှစ်ကြာ ရရှိမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီနောက်မှာ နိုင်ငံသား လျှောက်ထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို တရုတ်တို့ကဘက်က BNO ကို အသိအမှတ်မပြုတော့ကြောင်း ကြေညာချက်ကို ဗြိတိန်နိုင်ငံ အနေနဲ့ မကျေမနပ် ဖြစ်မိပေမယ့် အံ့ဩ ခြင်းတော့ မဖြစ်မိဘူးဆိုပြီးဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် ခဲ့ပါတယ်။
BNO အဆင့်အတန်း ရရှိထားသူတွေ အနေနဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ လာရောက် နေထိုင်၊ အလုပ်လုပ်ခွင့်နဲ့ ပညာသင်ကြားခွင့်ကို ရရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ လာရောက် အခြေချမယ့်သူတွေကို ကြိုဆိုသွားမယ်လို့လည်း ဗြိတိန်နိုင်ငံက ပြောပါတယ်။
ဟောငျကောငျနေ ဗွိတိသြှနိုငျငံသားတှကေို တရုတျအစိုးရ အသိအမှတျပွုတော့မညျမဟုတျ
ဗွိတိသြှကိုလိုနီဟောငျး ဟောငျကောငျနပွေညျသူတှကေို ထုတျပေးထားတဲ့ BNOလို့ချေါတဲ့ဗွိတိနျပွညျပနိုငျငံသားနိုငျငံကူးလကျမှတျတှကေို ဆကျလကျ အသိအမှတျပွုတော့မှာ မဟုတျဘူးလို့ တရုတျနိုငျငံက ပွောပါတယျ။
“BNO လို့ ချေါတဲ့ နိုငျငံကူး လကျမှတျက အရငျကလို ဆကျပွီး ရှိနမှော မဟုတျတော့ပါဘူး။ ဗွိတိနျနိုငျငံရဲ့ လုပျဆောငျခကျြဟာ တရုတျ နိုငျငံ ရဲ့အခြုပျအခွာ အာဏာကို ခြိုးဖောကျသလို ဟောငျကောငျနဲ့ တရုတျနိုငျငံရဲ့ ပွညျတှငျးရေးကိုလညျး ဝငျစှကျနပေါတယျ။ ဇနျနဝါရီလ ၃၁ ရကျနကေ့ စပွီး ဗွိတိနျပွညျပနိုငျငံသားနိုငျငံကူးလကျမှတျကို အသိအမှတျ ပွုတော့မှာ မဟုတျပါဘူး” လို့ တရုတျ နိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီးဌာန ပွောခှငျ့ရ Zhao Lijian က ပွောပါတယျ။
ဗွိတိနျနိုငျငံက ဟောငျကောငျသား အမြားအပွားကို ဗွိတိနျနိုငျငံရဲ့ ဒုတိယတနျးစား နိုငျငံသားတှေ အဖွဈ သှတျသှငျးဖို့ ကွိုးပမျးနေ တယျလို့လညျး တရုတျ ပွောခှငျ့ရ Zhao Lijian က ပွောပါတယျ။
တရုတျတို့က ဟောငျကောငျက ဒီမိုကရစေီ လှုပျရှားမှုတှကေို နှိမျနငျးအပွီးမှာ ဗွိတိနျနိုငျငံက ဟောငျကောငျနပွေညျသူ အမြားအပွားကို ခိုလှုံခှငျ့ပေးမယျလို့ ကတိပေးထားခဲ့တာပါ။
BNO အစီအစဉျအရ ဟောငျကောငျနေ လူပေါငျး ၅. ၄ သနျးက ဗွိတိနျနိုငျငံမှာ နထေိုငျခှငျ့နဲ့ အလုပျလုပျခှငျ့ ငါးနှဈကွာ ရရှိမှာဖွဈပွီး အဲဒီနောကျမှာ နိုငျငံသား လြှောကျထားနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
အခုလို တရုတျတို့ကဘကျက BNO ကို အသိအမှတျမပွုတော့ကွောငျး ကွညောခကျြကို ဗွိတိနျနိုငျငံ အနနေဲ့ မကမြေနပျ ဖွဈမိပမေယျ့ အံ့ဩ ခွငျးတော့ မဖွဈမိဘူးဆိုပွီးဗွိတိနျ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနက ကွညောခကျြ ထုတျပွနျ ခဲ့ပါတယျ။
BNO အဆငျ့အတနျး ရရှိထားသူတှေ အနနေဲ့ ဗွိတိနျနိုငျငံမှာ လာရောကျ နထေိုငျ၊ အလုပျလုပျခှငျ့နဲ့ ပညာသငျကွားခှငျ့ကို ရရှိနပွေီ ဖွဈကွောငျးနဲ့ လာရောကျ အခွခေမြယျ့သူတှကေို ကွိုဆိုသှားမယျလို့လညျး ဗွိတိနျနိုငျငံက ပွောပါတယျ။
ဒီမိုကရေစီကိုအားပေးတဲ့ ဟောင်ကောင်မီဒီယာလုပ်ငန်းရှင် Jimmy Lai ကို အာမခံနဲ့ ပြန်လွှတ်
လွှတ်တော်အမတ်လေးဦး ဟောင်ကောင်အစိုးရ ပယ်ဖျက်